Zu schön, um wahr zu sein? | Weltweite Kirche Gottes Schweiz - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
Toa tena marina ilay izy, ka manomboka ny laza malaza ary fantatrao fa toa tsy dia tanterahina izany. Fa raha toa ka tonga amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena marina izany. Na izany aza, misy ny olona manizingizina fa ny fahasoavana dia tsy azo atao ary mampiasa ny lalàna hialana amin'izay hitany fa fahazoan-dàlana hanota. Ny ezak'izy ireo am-pahatsorana nefa diso dia toa endrika ara-dalàna izay mandroba ny olona amin'ny fiovan'ny fahasoavana miovaova avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary mivoaka ao am-pontsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina (Romana 5,5).
Ny vaovao tsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy, ilay fahasoavan'Andriamanitra dia tonga teto amin'izao tontolo izao ary nitory ny filazantsara (Lioka 20,1) ny vaovao tsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny mpanota (izay misy fiantraikany amintsika rehetra). Saingy ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany dia tsy tian'ny toriteniny satria nametraka ny mpanota rehetra tao anatin'ny haavo izy ireo fa nahita ny tenany ho hafa noho ny hafa. Ho azy ireo dia vaovao ratsy tokoa ny toriteny nataon'i Jesôsy momba ny fahasoavana. Rehefa nisy ny zava-nitranga dia hoy ny navalin'i Jesosy azy: fanoherana ny kitrana, fa ny marary. Fa mandehana ary fantaro ny dikan'izany: »Tiako ny famindram-po fa tsy sorona«. Tonga aho mba hiantso ny mpanota fa tsy ny marina (Matio 9,12: 13).
Faly isika izao momba ny filazantsara - ny vaovao mahafaly momba ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy - nefa tamin'ny andron'i Jesosy dia tena nahasorena ireo mpitondra fivavahana marina izay nanamarin-tena. Ity vaovao iray ity ihany koa dia manelingelina an'ireo izay mino fa mila miasa mafy sy mafy kokoa izy ireo hahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Manontanian'izy ireo izahay ny fanontaniana famandrihana: Ahoana ary no fomba tokony anentanana ny olona hiasa mafy kokoa, hiaina araka ny tokony ho izy ary handray modely rehefa nilaza izy ireo fa efa eo ambany fahasoavana? Tsy afaka mieritreritra fomba hafa hitarika olona ianao afa-tsy amin'ny fanamafisana fifandraisana ara-dalàna na fifanarahana miaraka amin'Andriamanitra. Aza mba diso aho! Tsara ny miasa mafy eo amin'ny asan'Andriamanitra. Nanao izany fotsiny i Jesosy - Ny asany dia nitondra azy ho lavorary. Tsarovy, Jesosy Ilay tonga lafatra dia nanambara ny Ray tamintsika. Ity fanambarana ity dia ahitana ny vaovao tena tsara fa ny rafitra fandoavan'Andriamanitra dia miasa tsara noho ny antsika. Izy no loharanom-pahasoavana tsy manam-paharoa, fitiavana, hatsaram-panahy ary famelan-keloka.Tsy mandoa hetra isika mba hahazoana ny fahasoavan'Andriamanitra na koa hamatsy ara-bola ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Andriamanitra dia miasa amin'ny asa famonjena tsara indrindra, asa izay hanafaka ny olombelona amin'ny lavaka izay nianjerany. Tadidinao angamba ny tantaran'ny mpivarotra izay latsaka tao anaty lavaka ary niandrasana tsy nitsoaka. Nandalo ny lavaka ny olona ary nahita azy nitolona. Niantso azy ilay olona saropady: Miarahaba anao any. Tena mahatsapa amin'izy ireo aho. Naneho hevitra ny olona misaina hoe: Eny, lojika raha misy olona voatery latsaka tao an-davaka eto. Nanontany ny mpamorona ny atiny: Azoko atolotra anao hevitra ve ny fomba handravaka ny lavakao? Hoy ny fanavakavahana: Eto dia ho hitanao indray izany: ny olon-dratsy ihany no latsaka an-davaka. Nanontany ilay nanontany tena: ry lehilahy, nanao ahoana ny fahaizanao azy? Hoy ilay mpanao lalàna: "Fantatrao izay, heveriko fa mendrika ny hiafara amin'ny lavaka ianao. Nanontany ny tompon'andraikitra ny hetra hoe:" Lazao amiko, tena mandoa hetra ve ianao? "Hoy ilay olona nanenina:" Eny, ianao no tokony nahita ny lavaka aho.Naroso tamin'ny heviny ny buddist Zen: Milamina, miala sasatra ary tsy mieritreritra momba ny lavaka intsony. Hoy ny optimiste: Avia, mijere! Mety ho ratsy be tokoa izany, hoy ilay mpanao pessimist hoe: Loza! Hiharatsy ny toe-javatra rehefa nahita an ’ilay lehilahy (zanak’olombelona) tao anaty lavaka i Jesosy, dia nitsambikina ary nanampy azy hivoaka. Izany no fahasoavana!
Misy olona izay tsy mahatakatra ny lozan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mino izy ireo fa ny asany mafy dia manafaka azy ireo avy ao anaty lavaka ary heveriny ho tsy rariny raha mivoaka avy ao anaty lavaka ny hafa nefa tsy nanao ezaka mitovy. Ny mariky ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny hanomezany azy tamim-pahalalahan-tanana amin'ny olona rehetra tsy misy fanavahana. Ny sasany dia mila famelan-keloka bebe kokoa noho ny hafa, fa Andriamanitra dia mitovy amin'ny rehetra ny olona na inona na inona toe-javatra iainany. Tsy resaka fitiavana sy fangorahana fotsiny no resahin'Andriamanitra; nataony mazava rehefa nandefa an'i Jesôsy tao an-davaka izy mba hanampy antsika rehetra. Ireo mpanara-dalàna ara-dalàna dia mampiasa ny fahasoavan'Andriamanitra ho fahazoan-dàlana maimaim-poana, spontan ary fomba tsy miorina (Antinomianisme) diso tafahoatra. Tsy izany anefa no nahatonga azy, araka ny nosoratan'i Paoly tao amin'ny taratasiny ho an'i Titosy: satria ny fahasoavan'Andriamanitra nanasitrana dia niseho tamin'ny olona rehetra ary mandray antsika fifehezana fa mandà ny maha-olona tsy araka an'izao tontolo izao sy ny filana an'izao tontolo izao sy malina, marina sy malala-tena eto amin'ity tontolo ity velona (Titosy 2,11-12).
Aleo hazavaiko aho: rehefa mamonjy olona ny olona, ​​tsy avelany ao anaty lavaka intsony izy ireo. Tsy avelany ho azy ireo ny tenany hiaina ao anatin'ny tsy fahalavorariana, ny ota ary ny henatra. Mamonjy antsika i Jesoa mba hahafahantsika mampiasa ny herin'ny Fanahy Masina hivoaka avy ao an-davaka sy hanomboka fiainana vaovao izay misy ny fahamarinan'i Jesosy, ny fiadanana sy ny fifaliana. (Romana 14,17).
Ny fanoharana momba ireo mpiasa tao amin'ny tanimboaloboka Niresaka momba ny fahasoavana tsy misy fepetra an'Andriamanitra i Jesosy tao amin'ny fanoharany mikasika ireo mpiasa ao amin'ny tanimboaloboka (Mat 20,1: 16). Na manao ahoana na manao ahoana ny asa rehetra dia nahazo karama isan'andro ny mpiasa rehetra. Mazava ho azy (Izy io) ireo izay niasa ela indrindra dia sosotra satria nino fa ireo izay niasa kely dia tsy mendrika loatra. Mihevitra aho fa ireo izay niasa kely kokoa dia nihevitra fa nahazo mihoatra noho ny mendrika izy ireo (Hiverina any aho rahatrizay). Raha ny marina, ny fahasoavana ho azy dia toa tsy miangatra, fa Andriamanitra kosa (izay hita taratra amin'ilay olona tompon-trano ao amin'ny fanoharana) Raha ankasitrahantsika ny fitsarana, dia afaka misaotra an'Andriamanitra fotsiny aho avy ao am-poko! Tsy noheveriko fa afaka mahazo ny fahasoavan'Andriamanitra aho amin'ny fiasana mafy mandritra ny andro ao amin'ny tanimboaloboka. Ny fahasoavana dia afaka mandray am-pankasitrahana sy amim-panetren-tena ho fanomezana tsy mendrika - toy izany koa. Tiako ny fomba itarihan'i Jesosy ny mpiasa ao amin'ny fanoharany. Angamba ny sasany amintsika dia mahafantatra miaraka amin'ireo izay niasa ela sy niasa ary nieritreritra fa mendrika kokoa noho ny noraisin'izy ireo. Ny tena fantatro dia fantatro amin'ireo izay nahazo mihoatra lavitra noho izay mendrika azy amin'ny asany. Amin'ny toe-tsaina feno fankasitrahana ihany no ahafahantsika mankasitraka sy mahatakatra ny fahasoavan'Andriamanitra, indrindra fa ilaintsika maika izany. Ny fanoharan'i Jesosy dia mampianatra antsika fa mamonjy izay tsy mendrika izany Andriamanitra (ary tsy afaka mahazo izany ianao). Ilay fanoharana dia mampiseho ny fitarainan'ny mpanao lalàna ara-pivavahana fa tsy rariny ny fahasoavana (tsara loatra raha marina); Miady hevitra izy ireo, ahoana no fomba hamalian'Andriamanitra ny olona tsy niasa mafy toa azy ireo?
Voatosika noho ny fanamelohana na fankasitrahana?
Ny fampianaran'i Jesosy dia manaisotra ny fanamelohana izay ampiasaina ho fitaovana lehibe ataon'ny mpanao lalàna mba hahatonga ny olona hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra (na hatreto matetika aza ny sitrapon'izy ireo!). Ny fahatsapana ho meloka dia manohitra ny fankasitrahana noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fitiavany. Ny fahitana ny fahatsapan-tena ho meloka dia ny fahotantsika ary ny fankasitrahana (ny toetra ivavahana) mifantoka amin'Andriamanitra sy ny hatsarany. Avy amin'ny zavatra niainako manokana dia afaka milaza aho fa mahatsapa fa meloka (ary anisan'izany ny tahotra), manosika ahy, fa ny fankasitrahana noho ny fitiavana, ny hatsaram-panahy sy ny fahasoavan'Andriamanitra no manosika ahy bebe kokoa. Mifanohitra amin'ny fankatoavana ara-dalàna noho ny fahatsapana fanamelohana, ny fankasitrahana dia mifototra amin'ny fifandraisana. (avy ao am-po) - Niresaka momba ny fankatoavana ny finoana i Paoly (Romana 16,26). Io no hany fankatoavana ankatoavin'i Paoly satria io irery no manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fankatoavana vita amin'ny fifandraisana dia ny fankasitrahantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fankasitrahana no nahatonga an'i Paul handroso teo amin'ny asany. Izy io koa manosika antsika handray anjara amin'ny asan'i Jesôsy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina sy amin'ny fiangonany. Amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra, ity asa fanompoana ity dia mitarika ho amin'ny fiainam-piainana.Toa Kristy sy amin'ny fanampian'ny Fanahy Masina, isika dia zanaky ny Ray any an-danitra mandrakizay sy mandrakizay. Ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra hataontsika dia ny mitombo amin'ny fahasoavany ary ny hahafantatra Azy tsara sy tsara kokoa (2 Petera 3,18). Ity fitomboana amin'ny fahasoavana sy fahalalana ity dia hitohy ankehitriny sy mandrakizay any amin'ny lanitra sy tany vaovao. Mendrika ny trosa rehetra Andriamanitra!